Ajụjụ - Xiamen Joint Tech Co., Ltd.
Ebee ka m ga -akwụ ụgwọ ụgbọ ala m?
N'ụlọ n'ụlọ ebe a na -adọba ụgbọala / n'okporo ụzọ, ma ọ bụ n'ebe a na -adọba ụgbọala akpọrọ / ebe a na -adọba ụgbọala (nke a na -ahụkarị maka ụlọ).
N'ebe ọrụ n'ụlọ ebe a na -adọba ụgbọala nke ụlọ ọrụ gị, echekwara ma ọ bụ nke ọha.
N'ọhaneze n'okporo ụzọ, n'okporo ụzọ awara awara, na ebe ọ bụla na -adọba ụgbọala ọha, ị nwere ike icheta - dịka nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ nri, ụlọ oriri na ọ hospitalsụ hotelsụ, ụlọ ọgwụ wdg. Ọ bụrụ na "interoperability" na -arụ ọrụ, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ na ndị na -enye ụlọ ọrụ chaja dị iche iche.
Ogologo oge ole ka ọ na -ewe iji kwụọ ụgbọ ala m?
Oge ịkwụ ụgwọ na -adịgasị iche dabere na: ọkwa batrị gị ugbu a, ike batrị gị, ike na ntọala chaja gị, yana ike nke ebe nkwụnye ọkụ (dịka ma ọ bụ n'ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọfịs).
Ngwakọ ngwakọ na-achọ awa 1-4 ka ụgwọ zuru ezu, ebe ụgbọ ala nwere ọkụ eletrik chọrọ awa 4-8 (site na 0 ruo 100%). Ná nkezi, a na -adọba ụgbọala n'ụlọ ruo awa 14 kwa ụbọchị, yana ọrụ ihe dị ka awa 8 kwa ụbọchị. Site na ọdụ chaja dị n'aka gị, enwere ike iji oge a niile bulie ụgbọ ala gị 100%.
Ọpụpụ ọkụ eletrik mgbe niile: Kpachara anya ma ọ bụrụ na ị na -akwụ ụgwọ EV site na ọkụ eletrik oge niile. Ịkwụ ụgwọ n'ụlọ ga -achọ eriri USB chaja nke na -egbochi ike ọkụ na ikpo oke ọkụ. Tụkwasị na nke a, ị ga -achọkwa ijide n'aka na ọpụpụ dị nso n'ụgbọ ala gị, n'ihi na ịnweghị ike iji eriri mgbatị iji kwụọ ụgbọ ala gị. N'agbanyeghị na akpachapụrụ anya ndị a, ịkwụ ụgwọ site na ọpụpụ mgbe niile na -ada ada nke ukwuu, ebe ọ bụ na ọtụtụ ụlọ obibi anaghị arụ ọrụ iji nweta ọkụ eletrik dị elu. Oge ịkwụ ụgwọ ga-adabere na obodo ị nọ. Maka EV nwere oke 160 km, ị nwere ike ịtụ anya oge ịkwụ ụgwọ ihe dị ka awa 6-8 na Europe.
Ebe nchaji EV: Nke a bụ ụzọ akwadoro maka ịchaji ụgbọ ala, ebe ọ na -ejikwa ike ụgbọ ala gị na isi ike (dịka ụlọ ma ọ bụ ọfịs). Site na iji chaja dị n'aka gị, oge ọ bụla ị dara n'okporo ụzọ, ị ga -enwerịrị ụgbọ ala ebubo zuru oke yana oke kacha. Ụlọ ọrụ na -ahụ maka chaja nwere ike ịgba ụgwọ ihe ruru ugboro 8 ngwa ngwa karịa ngwa ahịa ọpụpụ. Nke a pụtara na EV ọ bụla ga-akwụ 100% naanị n'ime awa 1-4. Chọta nchịkọta oge ịchaji maka ike batrị kacha ebe a.
Ebe a na -ebu ngwa ngwa: Ebe a na -akwụ ụgwọ ngwa ngwa na -apụtakarị na mpụga obodo yana n'okporo ụzọ. N'agbanyeghị ngwa ngwa (ọ na-akwụ ụgwọ n'ime nkeji 20-30), nkezi chaja ngwa ngwa na-eweta EV naanị ihe ruru 80% n'oge otu chaja. N'ihi akụrụngwa na ngwaike dị ọnụ nke ụlọ ọrụ na -akwụ ụgwọ ngwa ngwa, a na -azụta chaja ndị a ma wuo ya naanị site n'aka gọọmentị ime obodo.
Kedu ụdị chaja m kwesịrị ịwụnye?
Enwere ọtụtụ ụdị chaja - gụnyere ọkwa 1, ọkwa 2 na chaja ngwa ngwa DC - yabụ nke ị họọrọ ga -adabere n'ọtụtụ ihe. Ndị a gụnyere okwu ndị ahịa a na -atụ anya ya, ọnụ ahịa ya na echiche atụmatụ saịtị.
Kedu ihe nrụpụta saịtị na -emetụta ọnụ nrụnye?
Ọnụ ego nrụnye ọdụ chaja nwere ike karịa ọnụ ahịa ngwaike n'onwe ya yana ọtụtụ ihe nrụpụta nke ekwesịrị ịtụle dị ka:
Ọrụ ọkụ eletrik dị ugbu a. Ntinye ụlọ ọrụ chaja ọhụụ kwesịrị ịnwe nyocha ibu nke emere na ọkụ eletrik nke ụlọ ọrụ ahụ iji chọpụta ma enwere ike ịgbakwunye ọdụ chaja EV. Ụlọ ọrụ AC Level 2 ga-achọ elekere 240-volt (40 amp) raara onwe ya nye na ịkwalite ọrụ eletrik nwere ike ịdị mkpa.
Anya dị n'agbata ogwe ọkụ na ọdụ chaja. Ogologo dị anya n'etiti igwe eletriki na ọdụ chaja EV pụtara ụgwọ nrụnye dị elu n'ihi na ọ na -abawanye ọnụọgụ nke mkpa (na ndozi), eriri mmiri, na waya. Ọ bụ ihe na -achọsi ike ka ịbelata ohere dị n'agbata ọkụ eletrik na ọdụ chaja EV ka o kwere mee ka ị na -atụlekwa ebe ọdụ ụgbọ mmiri dị na ihe ahụ.
Ọnọdụ ebe chaja dị na ihe onwunwe. Tụlee mmetụta ịtinye ọdụ chaja n'otu ebe na ihe onwunwe. Dịka ọmụmaatụ, idobe oghere ebe a na -adọba ụgbọala n'azụ ụlọ nwere ike ịkụda mmụọ ha, mana ndị ahịa ndị ọzọ nwere ike iwe iwe ma ọ bụrụ na etinyere ebe a na -adọba ụgbọala n'ime oghere ndị na -adọba ụgbọala nke na -adịkarị ohere n'ihi na ndị ọkwọ ụgbọala EV dị ole na ole.
Ntụle ndị ọzọ enwechaghị mmetụta na ụgwọ nrụnye mana ha nwere ike imetụta etu ụlọ ọrụ si arụ ọrụ nke ọma n'ịbara ndị ọkwọ ụgbọala EV na ndị ahịa ndị ọzọ uru. Ụfọdụ n'ime ndị a gụnyere ụzọ eriri eriri na -ewe mgbe a na -eji ya yana omume njikwa ebe a na -adọba ụgbọala.
Enwere m ike ịkwụ ndị mmadụ ụgwọ maka iji chaja m?
Ee, a na -ahapụ gị ka ị kwụọ ndị mmadụ ụgwọ maka iji ọdụ gị n'agbanyeghị na ọtụtụ ndị nwe ọdụ na -ahọrọ ịnye chaja efu ka ọ bụrụ aghụghọ ma ọ bụ uru. Ọmụmaatụ nke a bụ onye na -ewe mmadụ n'ọrụ na -enye ndị ọrụ na ndị ahịa ha ụgwọ n'efu. Ọ bụrụ na ị kpebie ịkwụ ụgwọ maka ojiji enwere ọtụtụ ihe ị ga -atụle n'ịchọpụta nke kacha dịrị gị mma.
Ịkwụ ụgwọ maka ojiji dabere na ebe mgbakọ. Mkpebi gị ga -adabere na mpaghara ebe ọ na -arụ ọrụ. N'ebe ụfọdụ nke steeti New York, ọkachasị n'obodo ndị buru ibu, ụfọdụ garages na -akwụ ụgwọ maka ebe a na -adọba ụgbọala nwere ike ịchọta ndị ahịa dị njikere ịkwụ ụgwọ maka chaja EV kwa oge n'ihi na ha enweghị ike ịkwụ ụgwọ n'ụlọ ha.
Nchaji maka ojiji dabere na ebumnuche nrụnye saịtị. Uru ụlọ ọrụ na -eweta abụghị naanị ohere iji wepụta nloghachi na itinye ego site na ọdụ chaja. Ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ nwere ike ịdọta ndị ọkwọ ụgbọ ala EV nke na-akwado azụmahịa gị, na-ejigide ndị ọrụ bara uru, ma ọ bụ nye echiche nke ọrụ nlekọta gburugburu ebe obibi gị nke nwere ike inye aka dọta ndị bi na EV, ndị ọrụ, ma ọ bụ ndị ahịa.
Kedu ka ịkwụ ụgwọ maka ojiji si arụ ọrụ. Ndị nwe ọdụ nwere ike ịkwụ ụgwọ maka iji otu elekere, otu nnọkọ, ma ọ bụ otu ọkụ eletrik.
Kwa Oge: Ọ bụrụ na ị na -akwụ ụgwọ n'otu elekere, enwere ụgwọ edobere maka ụgbọ ala ọ bụla ma ọ na -akwụ ụgwọ ma ọ bụ na ọ naghị akwụ, ụgbọ ala dị iche iche na -enweta ọkụ eletrik na ọnụego dị iche iche, yabụ ọnụ ahịa ike nwere ike ịdị iche iche site na nnọkọ chaja.
Kwa Oge: Nke a na -abụkarị ihe dabara adaba maka chaja ebe ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ cha cha nke nwere obere oge.
Kwa nkeji ike (na-abụkarị kilowatt-hour [kWh]): Nke a na -ekwu maka ezigbo ọnụ ahịa ọkụ eletrik maka onye nwe ụlọ na -akwụ ụgwọ, mana ọ naghị enye ihe mkpali maka ụgbọ ala nke ebubo zuru oke ịhapụ oghere.
Ụfọdụ ndị nwe saịtị ahụ anwalela njikọ nke ụzọ ndị a, dị ka ịkwụ ụgwọ ọnụego dị larịị n'ime awa abụọ mbụ, mgbe ahụ ọnụego na -abawanye maka nnọkọ ogologo. Ebe ụfọdụ nwere ike chọọ iwelata mmefu ọrụ ha site na isonye na netwọkụ chaja na ịnye chaja n'efu.
Gịnị mere ịkwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ ji dị oke mkpa?
Ka ọtụtụ ndị mmadụ na -anya ụgbọala ka ha na -arụ ọrụ na ndị ọkwọ ụgbọala EV na -achọ ịkwụsị ụgwọ ha mgbe ọ bụla enwere ike ịnye ụgwọ ọrụ bụ nnukwu uru ndị ọrụ maka ndị were ha n'ọrụ inye. N’ezie, ịkwụ ụgwọ n’ebe ọrụ nwere ike ihe ruru mmadụ abụọ na-arụ ọrụ EV ọkụ eletrik kwa ụbọchị. Maka ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ, ịkwụ ụgwọ ebe ọrụ nwere ike inye aka dọta ma jigide ndị ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma ma gosipụta onye ndu n'ịnara teknụzụ ike dị ọcha.
Broshuọ Nchaji Ebe Ọrụ NYSERDA [PDF] na -enye nkọwa nke uru nke ịwụnye ọdụ chaja na ebe ọrụ yana ntuzi aka na usoro nhazi, ịwụnye na ijikwa akụrụngwa chaja EV.
Ngalaba Energy's Ịkwụ ụgwọ ụlọ ọrụ saịtị ahụ na -enye ntuziaka maka itinye ndị ọrụ n'ọrụ iji rite uru a, yana ozi zuru ezu banyere ịtụle, ịhazi, ịwụnye na ijikwa ụgwọ ọrụ.
Kedu ụlọ ọrụ ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa DC?
Ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa DC na-eji nnyefe ike ugbu a (DC) yana ntinye 480-volt alternating current (AC) iji nye nkwụghachi ngwa ngwa na ebe a na-akwụ ụgwọ ọha. Dabere na EV, ụlọ ọrụ na -akwụ ụgwọ ngwa ngwa DC nwere ike nyeghachi 80% ihe dị ka nkeji iri abụọ. Ọgba chaja na -adabere nha batrị ụgbọ ala yana akụrụngwa chaja, mana ọtụtụ EVs nwere ike ịkwụ ụgwọ ugbu a karịa 100 kW (ihe karịrị otu narị kilomita na nkeji iri abụọ). Ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa DC bụ nhọrọ maka ọkụ eletrik niile ugbo ala. Ngwakọ ngwakọ dị ole na ole nwere ike iji chaja ngwa ngwa DC. Enwere isi njikọ atọ maka chaja ngwa ngwa DC; EV nke nwere ike iji chaja ngwa ngwa DC dakọtara na otu n'ime ndị a:
Sistemụ Nchaji ejikọtara na SAE (CCS) bụ ọkọlọtọ chaja nke ọtụtụ ndị na -arụ ụgbọ ala na -eji
CHAdeMO bụ ọkọlọtọ chaja nke Nissan na Mistubishi na -ejikarị
Netwọk Supercharger nke Tesla dabere na teknụzụ chaja nkeonwe nke ụgbọ ala Tesla nwere ike iji
Ọtụtụ ụlọ ọrụ ọha na nkeonwe na -ewu ọtụtụ ọdụ ụgbọ ala na steeti New York na karịa, gụnyere New York Power Authority, Electrify America, EVgo, ChargePoint, Greenlots, na ndị ọzọ.